QOFKA SOOMAALIYEED NOLOSHA QURBAHA WUU KU GUULAYSTAA , LAAKIIN NOLOSHA DALKIISA WUU KU GUUL DARAYSTAAA ,
Waa maxay sirta ku jirtaa in uu qofka soomaaliyeed ku guulaysto nolosha qurbaha , ee uu meel sare uga gaadhaa nolosha . ee uu u adkaysto duruufaha ad adag ee ka horyimaada kana adkaado .
Waxaynu wada ognahay in uu qofka soomaaliyeed ka midho dhaliyo dalalka uu u haajiro , isaga oo fara madhnaan lataga marka hore , laakiin marka uu muddo yar joogo wuxuu furtaa ganacsi oo dadkii dalka u dhashay ama ku noolaa mudada dheer wuu wada dhaafaa .
Waynu wada ognahay sida ay soomaalidu u qabsadeen ganacsiga dalal badan oo afrika ku yaala iyagoo dhawaan gaadhay dalalkaa .
Dhinaca yurub iyo waqooyiga america na waynu ognahay inay umadihii dhulalkaa uga horeeyay ay dhafeen , hadday tahay dhaqaale am siyaasad , oo meelo badan ayay baarlamaanada aduunka ku jiraan oo loo doortay , iyada oon cid ajinabi ahi uga horayn .
Markii ay dagaaladu somaliya ka dhaceen , dadka soomaaliyeed waxay u kala qaxeen qaaradaha aduunka oo dhan ( africa -asia- yurub iyonorth america – ustaraaliya newzeeeland) , waxay tageen meelo aanu weligeed qof soomaaliyeed ama qof madoobi aanu tegin kuna noolaan , waxay kari kareen inay degaan oo degenaansho ka helaan , oo shaqo iyo nolol ka abuurtaan .
Welibana ay ganacsi ka abuurtaan oo ay noloshooda wax u qab sadaan , qoysaskoodii iyo qaraabadoo diina ay masruuf uga diraan , dalkiina ay ka shisaan .
Markii ay dagaaladii dhamaadeenna dalkii ay dib u dhiseen , qaar badanina waabay ku noqdeen .
HADABA WAA MAXAY SIRTA KU JIRTA INUU QOFKA SOOMAALIYEED NOLOSHA QURBAHA KU GUULYSTO OO KA MIDHO DHALIYO ?
Qofka soomaaliyeed nolosha adag wuu ka dabaashaa , waanu ka guulaystaa duruufaha adag ee la kulma , isaga oo caqligiisa fiican adeeg sanaaya , oo wuxuu noqdaa qof la qabsada meesha uu tago , fahmana waxa yaala .
Hadaba waxa iswaydiin leh , qofka soomaaliyeed muxuu nolosha dalkiisa ugu guulaysan waayay ? ee uu nolol uga abuuran kari waayay ? iyada oo illaahay dalkiisa khayraad badan ku abuuray , hadday tahay dhinaca xoolaha ee weli marba meel loola guuraayo , ama hadday tahay dhinaca beeraha isaga oo haysta dhul balaadhan oo dihin , ama hadday tahay dhinaca badda ee uu dalkiisu leeyahay , illaahayna ku manaystay khayraad aan la soo koobi karin .
Hadaba qofka soomaaliyeed ma qof aan waxba abuuran karayn baa ? laakiin ka midho dhalin kara , wax qof kale sii samaystay ?
Qofka soomaaliyeed ma qof samirku ku yar yahay baa ? oo aan waxba sugi karin .
Hadaba maxay dadku ( dhalinyaradu ) iyaga oon waxba isku dayin inay dalka gudihiisa ka samaystaan (nolol) ,ay tahriibta iyo ismiidaaminta naftooda ay u door bideen .
Waxa hubaal ah , haddii dadkan soo tahriibayaa , ay isku tijaabin lahaayeen , inay dalkooda gudihiisa nolo ka samaystaaan , way ku guulaysan lahaayeen , nolo ta qurbaha ka fiicanna way ka heli lahaayeen , oo rajo iyo mustaqbal wanaagsan leh .
Hadaba waxaan dad badan oo doonaaya inay soo tahriibaan kula talin lahaa :
WAAR BAL HORTA INTAANAD SOO TAHRIIBIN OO AANAD NAFTAADA KU SOO KHAMAARIN , BAL WAXAAD ISKU DAYDAA INAAD WIXII AAD KU SOO TAHRIIBI LAHAYD , AAD TIJAABISO INAAD DALKAAGA WAX KAGA QABSATO .
BAL HORTA IS TIJAABI , ILAAHAYNA TALO SAARO INUU KUGU GUULEEYO , IIMAANKAAGANA DEJIN .